Umklomelo Wamazwe Ngamazwe Wama-VIII Wezithombe Zobuciko | Izincwadi Zamanje
Fnac y Izinhlelo zeSalamandra babizele i Uhlelo lwe-VIII lwe-International Award inoveli yezithombe eSpain.
Isikhathi sokubhalisa siphela ngoNovemba 28, 2014 futhi umklomelo ngama-euro ayi-10.000 wombhali wenoveli yezithombe ewinile.Lapha unalo lonke ulwazi mayelana nomncintiswano:
Ngenhloso yokukhuthaza nokukhuthaza ukukhiqizwa kwemibhalo emkhakheni wamahlaya, iFnac neSalamandra Graphic babiza uhlelo lwesi-XNUMX lomklomelo wamazwe omhlaba wamanoveli wezithombe.
Ohlelweni lwayo lokuqala (2007), umklomelo waya kumbhali uJorge González, we 'Fueye'. Ocingweni lwesibili (ngo-2008), abaphumelele kwaba nguGuillaume Trouillard noSamuel Stento, be'The station of arrows '. U-Esteban Hernández nguyena owawina uhlelo lwesithathu (2009) lwe- '¡Pintor!', NoMireia Pérez kolwesine (2010) lwe 'The girl wild'. UJuan Berrio nguyena owanqoba 'uLwesithathu' kushicilelo lwesithupha (2011), uSento Llobel waklonyeliswa ngo-2012 ngo'Dokotela osemusha 'no-Antonio Hitos kumagazini wokugcina we-'Inercia', umsebenzi ozohlelwa yiSalamandra Graphic ku ukuphela kwalo nyaka.
Isikhathi esinqunyiwe sokulethwa kwamaphepha sesivuliwe futhi sizophela ngoNovemba 28, 2014.
Izisekelo ezizolawula umklomelo yilezi ezilandelayo:
1. Bonke ababhali abafisa ukwenza kanjalo, banoma iluphi ubuzwe noma imvelaphi, abaneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala bangafanelekela ukuthola uMklomelo, inqobo nje uma imisebenzi abayithumelayo ihambisana nomqondo ovame ukwamukelwa wamanoveli wokuqhafaza futhi ihlangabezana nezimfuneko ezilandelayo:
-Zibhalwe kuphela ngeSpanishi.
-Yiba ngeyokuqala futhi ungashicileli ngokuqinile (ayishicilelwanga ngefomethi yencwadi, ngencwadi ye-elektroniki, nge-Intanethi, noma nge-serial kumagazini).
-Azihambelani nombhali obikiwe ngaphambi kokumenyezelwa kwalolu cingo.
-Abakaze banikezwe phambilini komunye umncintiswano, noma basalinde isinqumo kunoma yimuphi omunye umncintiswano ngosuku lokuphela kokuphela.
Imisebenzi ethunyelwe engahlangabezani nezimfuneko ezingenhla ngeke yamukelwe kulo mncintiswano.
Isimo esizothunyelwa emncintiswaneni singamahlaya, ngefomethi yaso yenoveli. Umbhali ngamunye kufanele athumele isiphakamiso sencwadi esinamakhasi okungenani ayi-16 (XNUMX) aqediwe ohlangothini olulodwa kuphela; ukunwetshwa kokugcina, kowinile, kuzoba ubuncane be-
amakhasi ayisishiyagalolunye nesithupha (96). Ingalethwa ngombala omnyama nomhlophe noma umbala, kufakwe idosisi enamakhasi aqediwe ayishumi nesithupha (16), nesihloko esihambelana nawo, eMadrid, ngoMeyi 26, 2014
Amakhophi aprintiwe ngefomethi ye-DIN-A4, kanye ne-synopsis enemininingwane (okungenani amakhasi amabili  ohlangothini olulodwa) nokuqukethwe yindaba ephelele.
Amakhophi athi (umsebenzi wokuqala ngeke wamukelwe) uzohambisana nemininingwane yombhali noma yababhali: igama, isibongo, ikheli, ucingo, i-imeyili kanye nekhophi ye-DNI,
ipasipoti noma omunye umazisi owamukelwe ngokusemthethweni.
Lapho umklomelo usuklonyelisiwe, imisebenzi engaklonyeliswa ngeke isabuyiselwa. Njengoba kungezona ezangempela, zizobhujiswa uma inqubo isiqedile.
Imisebenzi izothunyelwa noma ihanjiswe, ekhombisa emvilophini i- "VIII International Prize for Graphic Novel Fnac-Salamandra Graphic", ekhelini elilandelayo leposi: Ediciones Salamandra, c / Hermosilla, 121, 1º B - 28009 Madrid.
Amaphrojekthi athunyelwe nge-imeyili noma kwabezindaba ngaphandle kwephepha eliphrintiwe ngeke amukelwe (ngakho-ke, ukuthunyelwa kwi-CD, iDVD, amapeni okushayela noma okufanayo akufakiwe).
Xhumana ne-imeyili ngokungabaza nemibuzo: umklomelo@salamandra.es
Umnqamulajuqu wokwamukelwa kweziphakamiso uzovalwa ngoLwesihlanu, Novemba 28, 2014.
Ijaji lizohlangana ekupheleni kuka-2014 bese isinqumo sizomenyezelwa ngoJanuwari 2015. Umbhali ozonqoba uzozibophezela ukuletha iphrojekthi eqediwe ngesonto eledlule likaJuni 2015. Umsebenzi wokuwina uzoshicilelwa ekupheleni kuka-2015.
Ijaji lizokwakhiwa ngochwepheshe bezamasiko futhi lizokhethelwa le nhloso izinhlangano ezithuthukisayo, ezigcina ithuba lokuthi ikomidi elifundayo likhethe kokuthoma okwethulwe njengabaningi bokugcina njengoba libona lifanele.
6. Umklomelo nesinqumo seJury
I-Fnac izoletha umklomelo owodwa futhi ongahlukaniseki we-10.000 (izinkulungwane eziyishumi) zama-euro (okumele akhokhwe ngezinkokhelo ezimbili: ama-50% enani ngemuva kokuxhumana kwesinqumo; kanye ne-50% esele ngesikhathi sokushicilelwa). Isiphakamiso esiphumelelayo, uma sesithuthukiswe ngokuphelele, sizoshicilelwa ngumshicileli u-Ediciones Salamandra, lapho samukelwa ngumnqobi wemigomo nemibandela esungulwe yilowo oshicilele uhlelo lwemisebenzi. Owinile uzosayina inkontileka nalo mshicileli isikhathi esiyiminyaka eyi-10, esivuselelekayo nephesenti lobukhosi elingu-8%. Imvume ye-
Lo mklomelo usho ukuthi u-Ediciones Salamandra uzophatha kuphela wonke amalungelo okuxhashazwa womsebenzi, kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izilimi, kanye nawo wonke amalungelo okushicilela kuyo yonke imidiya.
Ngasikhathi sinye, i-Fnac inelungelo lokuhlela ngezinto zokuqala zomsebenzi owinile umbukiso ongakhonjiswa emibhalweni yawo, eSpain nakwamanye amazwe. Inani lomklomelo lizoncika kumthetho wokugodla imithethonqubo yentela.
Isinqumo sejaji sizoba sesokugcina, umklomelo kungenzeka ungamenyezelwa njengongekho emthethweni noma usatshalaliswe phakathi kwemisebenzi emibili noma ngaphezulu futhi uzonikezwa lowo msebenzi phakathi kweMadrid, ngoMeyi 26, 2014 owethulwe ngazwi linye noma, ngokwehluleka lokho, ngamavoti amaningi amajaji, kubhekwa njengokufanele ukunikezwa.
7. Ukusatshalaliswa nokwethulwa emphakathini
Umsebenzi ozowina uzosatshalaliswa ngu-Ediciones Salamandra kanti uFnac uzoqinisekisa ukuqaliswa kwawo okukhethekile nokuxhumana kuzo zonke izindawo zawo zokuhweba.
Ukwethulwa emphakathini kwalo mklomelo kuzobanjelwa kwesinye seForamu i-Fnac, noma yikuphi lapho inhlangano ibona kufaneleke kakhulu.
Iqiniso lokubamba iqhaza emncintiswaneni lisho ukwamukelwa okugcwele kwalezi zisekelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umklomelo We-VIII Wamazwe Omhlaba Wenoveli Yezithombe